Warshad tolmo wanaagsan leh - Shiinaha-xidhkii Fabric-saareyaasha, Shirkado
Waa hab fiican oo lagu wanaajiyo alaabtayada iyo xalalka iyo dayactirka. Hadafkeenu wuxuu noqon doonaa inaan u dhisno xalal hal abuur leh macaamiisha leh khibrad weyn oo ku saabsan Dharka Dharka leh,,,, Waxaan haynaa aqoon xirfadeed iyo khibrad hodan ku ah wax soo saarka. Waxaan guud ahaan u maleyneynaa in guushaada ay tahay shirkadeena ganacsi! iyada oo ay ugu wacan tahay taageero aad u wanaagsan, badeecooyin kala duwan oo tayo sare leh, kharashyo gardaro ah iyo gaarsiin wax ku ool ah, waxaan jecel nahay magac aad u fiican oo dhex mara macaamiisheena. Waxaan nahay shirkad firfircoon oo leh suuq ballaadhan oo loogu talagalay Dharka Dharka leh, Waa maxay qiimaha wanaagsan? Waxaan siinaa macaamiisha qiimaha warshadda. Ujeeddada tayada wanaagsan, waxtarka waa in fiiro gaar ah loo yeesho lana ilaaliyo faa'iidooyinka hooseeya iyo kuwa caafimaad ee habboon. Waa maxay gaarsiinta degdegga ah? Waxaan gaarsiinta gaarsiinaynaa iyadoo loo eegayo shuruudaha macaamiisha. In kasta oo waqtiga diristu kuxirantahay tirada amarka iyo kakanaanta ay leedahay, hadana waxaan wali isku dayeynaa inaan alaab ku keeno waqtiga. Si daacadnimo leh ayaan u rajeynaynaa inaan yeelanno xiriir ganacsi oo muddo dheer ah.